အမေရိကန်-တရုတ်ကြား ကုန်သွယ်ရေး၊ နည်းပညာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကုလသမဂ္ဂ အကြီးအကဲ တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာ ဆွေးနွေးမှုနှင့် ညှိနှိုင်းမှုတွင် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်နှင့် စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ်က ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝါရှင်တန်က တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နည်းပညာအငြင်းပွားမှုအပေါ် မှတ်ချက်ပြုရာ၌ ဂူတာရက်စ်က ၎င်းအနေဖြင့် စည်းလုံးမှုရှိသော ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်နှင့် စည်းလုံးမှုရှိသော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွက် လိုအပ်ချက်ကို အမြဲတစေထောက်ခံလျက်ရှိကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
“ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲမယ့်အရေးကိစ္စအားလုံးကို ရှောင်ရှားဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်တော် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ ဥပဒေချမှတ်ခြင်း၊ ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဓိကငွေကြေးတွေ၊ ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်တဲ့ အင်တာနက်နဲ့ ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်တဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနဲ့ ဉာဏ်ရည်တုနဲ့ အခြားသောကဏ္ဍတွေအားလုံးပေါ့” ဟု ၎င်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စီးပွားရေးနိုင်ငံနှစ်ခုအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့အခြေအနေကို ရှောင်လွှဲရန် ဆွေးနွေးမှုနှင့် ညှိနှိုင်းမှုမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာအပေါ် ဘုံအခြေအနေရှာဖွေရန် ဂူတာရက်စ်က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“အခု လက်ရှိအချိန်မှာ မတူကွဲပြားမှုတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်သွားပါပြီ။ အမေရိကန်နဲ့ရော တရုတ်နဲ့ပါ အရေးပါတဲ့ ဆွေးနွေးမှုနဲ့ ညှိနှိုင်းမှုများစွာအပေါ် ကျွန်တော် ထောက်ခံပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-01-22 07:03:59
UNITED NATIONS, Jan. 21 (Xinhua) — UN Secretary-General Antonio Guterres on Friday called for dialogue and negotiation between the United States and China over trade and technology to avoid the polarization of the world market and economy.
“Now, it is clear that, at the present moment, there areanumber of differences,” he said. “I’ve been advocating, both with U.S. and with China, on the importance ofaserious dialogue andaserious negotiation.” ■
Photo : Photo taken on Sept. 24, 2015 shows the national flags of China (R) and the United States as well as the flag of Washington D.C. on the Constitution Avenue in Washington, capital of the United States. (Xinhua/Bao Dandan)